Dhibaato dhaqaale oo ba'an oo ka jirta Faransiiska | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Jose Manuel Vargas sawir-haye | | Dhaqaalaha guud
Madaxweynaha Faransiiska, François Hollande, wuxuu ku dhex milmay dhibaato culus. Caannimadiisa ayaa hoos u dhacday maadaama uu dhaqaalaha dalkiisa u horseeday fadhiidnimo (rubuc labaad oo isku xigta oo koritaanka eber ah). Laakiin marka lagu daro, Faransiiska ayaa si tartiib tartiib ah u noqonaya isku xiraha ugu liita aagga euro-da oo uu weheliyo Talyaaniga, iyada oo aan la helin suurtagal weyn oo suurtagal ah in labada dalba ay iskood uga baxaan xaaladdan.
Waxaa jirtay waqti ay dhaqaalayahanada hormoodka ahi u maleeyeen in Spain, Griiga ama xitaa Boortaqiiska ay soo bandhigi doonaan dhibaatada ugu dambaysa ee halista galin doonta lacagta Euro una horseedi doonta kala dhantaalnaanta dhamaan kooxdii. Si kastaba ha noqotee, hadda waa Faransiiska oo si tartiib tartiib ah u qaadanaya doorka weyn khatar ku ah lacagta keliya ee Yurub. Waxa hubaal ah in dhibaatada Eurozone ay gashay weji labaad.
Calaamaduhu ma noqon karaan kuwo daran sida dhowr sano ka hor, laakiin ugu yaraan waa kuwo aad u muuqda. Kobaca dhaqaalaha ee liita ama hoos udhaca wadamada sida Talyaanigu waxay muujinayaan in waraaqaha dheelitirka bangiyada Yurub ay bilaabi doonaan inay mar kale lumiyaan. Iyadoo aan la sii dhaafin, ayaa Bankiga Dhexe ee Yurub Ma awoodo inay dejiso siyaasad lacageed oo ku filan sababtoo ah hoos u dhaca dhaqaalaha sida Jarmalka, Faransiiska ama Talyaaniga.
Haddii aan ka tagno lacagta euro-da, tusaale ahaan Boqortooyada Ingiriiska, waxay kori doontaa 3,4% sannadkan iyo 3% 2015, sida lagu sheegay xogta ay soo saartay Bank of England. Saddexdii bilood ee labaad ee 2014, dhaqaalaha Ingiriiska wuxuu kordhay 0,8%, halka dhaqaalaha Jarmalka uu hoos u dhacay foosha 0,2%, xitaa kahor saameynta in Cunaqabateynta Yurub iyo Mareykanka ee saaran Ruushka. Sidaa darteed, rubuc seddexaad oo aad u adag ayaa laga filayaa wadamada bilaabay euro.
Faransiiska, si hufan, waxna kama soo saarin illaa hadda 2014. Sidan oo kale mas'uuliyiinta Faransiiska, oo uu hogaaminayo Hollande, ayaa lagu qasbay inay yareeyaan saadaashooda kobaca ee 1% ilaa 0,5% sanadkaan (lambarrada qaar oo runtii kaliya wax ka qabta inta ugu badan) rajo wanaagsan) Saadaasha sanadka 2015 waxaa loo yareeyay kororka 1%. Faransiiska wali kuma riyaaqin laba rubuc oo isku xigta oo ah koritaan wanaagsan tan iyo bilowgii 2012.
Kobcin la’aanta ayaa gabi ahaanba caqabad ku noqotay qorshooyinka maaliyadeed ee Hollande. Madaxweynaha Faransiiska wuxuu rajeynayey inuu yareeyo hoos u dhaca miisaaniyada sanadkaan 3,8%, laakiin maalmihii ugu dambeeyay waxaa lagu qasbay inuu qirto in ugu badnaan la gaari karo ay noqon doonto 4% GDP. Shaki la'aan, wuxuu kujiraa dhibaato culus ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Dhibaatooyinka dhaqaale ee Faransiiska iyo François Hollande
Dhibaatada guryaha kirada ee Mareykanka